Xildhibaan Abukaato: Xildhibaanada Mooshinka wada codeynta waxa ay rabaan gacan taag inay noqoto | Maalmahanews
Xildhibaan Abukaato: Xildhibaanada Mooshinka wada codeynta waxa ay rabaan gacan taag inay noqoto
Xildhibaan Maxamuud Abukaato oo ka mid ah Golaha shacabka Soomaaliya ayaa sheegay in Xildhibaannada wada mooshinka ka dhanka ah Gudoomiyaha Baarlamaanka ay doonayaan in mooshinka uu noqdo gacan taag.
Waxa uu sheegay in Dastuurku uu qorayo mooshinka marka loo codeynayo in uu noqdo qarsoodi hayeeshee Ragga hadda mooshinka wada ay doonayaan in dastuurka la garab maro oo gacantaag laga dhigo si ay u ogaadaan inta codka siisay iyo in inta kale.
Xildhibaanku waxaa uu sheegay kuwa uu ku tilmaamay qas wadayaal in aysan heysan tiro ku filan sidaas darteedna ay doonayaan in ay gacan taag u dhacdo mooshinka ka dhanka ah guddoonka Golaha shacabka Soomaaliya.
Gudoomiye Jawaari ayaa Xildhibaannada Mooshinka ka keenay ka codsaday in ay tirada dhameystirtaan 10 maalmood gudahood sida uu qaba xeer hoosaadkana ay mooshinka geeyaan Golaha shacabka.
Waxa uu Guddiyada joogtada ah ee Golaha shacabka ugu baaqay in ay waqti mucayin ah u qabtaan waqti cod u qaadidda Mooshinka lana geeyo meel dhex dhexaad ah isaga oo intaas ku daray in loo baahan yahay in ay kor joogto ka noqdaan beesha Caalamka iyo Culimada Soomaaliyeed.